David De Gea oo doonaya inuu Markiisii ugu horreeyay ku guuleysto….. – Gool FM
David De Gea oo doonaya inuu Markiisii ugu horreeyay ku guuleysto…..
Byare March 29, 2018
(Manchester) 29 Maarso 2018. Goolhayaha Manchester United David de Gea ayaa doonaya inuu markiisii ugu horreeyay ku guuleysto abaal marinta Gacmo gashiga dahabka ah ‘Golden Glove’ ee goolhayaha ugu fiican Premier League.
Goolhayaha reer Spain ayaa shabaqiisa ilaashaday Premier League 15-kulan balse waxaa abaal marinta kula loolamaya midka Man City Ederson oo shabaqiisa la gaarin 14-kulan iyo Thibaut Courtois oo abaal marinta ku guuleystay kal ciyaareedkii tagay.
“Waan jeclaan lahaa inaan ku guuleysto, ma ahan kaliya sanadkan balse sanad kasta,” De Gea ayaa sidaa yiri.
“Waxay ka tarjumeysaa sida wacan ay kooxda u difaactantay guud ahaan marka uu goolhaye ku guuleysto abaal marin ceynkan oo kale ah.
“Si fiican ayaan u difaactannay koox ahaan kal ciyaareedkan wuxuuna noqon doonaa abaal marin ay wada qaadeen saaxiibadeyda kooxda gaar ahaan kuwa jooga daafaca kuwaa oo ku ilaalinaya.”.
Simeone oo siinaya Barcelona fursad ay ku qaadan karto Antoine Griezmann
3-kamid ah ciyaartoyda Real Madrid oo ka horyimid in Neymar la keeno kooxda